Fandaniana Maimaim-poana - Best Forex EA | Expert Advisors | FX Robots
HomeFree Forex ToolsStrength Meter Meter
BEST Forex EA'S | Expert mpanolo-tsaina | FX ANY JAPON Free Forex Tools Comments Off amin'ny tsenan'ny vola
Strength Meter Meter is provided by
The Strength Meter Meter dia manolotra ny fomba fijerin'ny ankapobeny amin'ny tsenam-bola. Izy io dia mizara ny fampisehoana ny isam-bolana voafantina manoloana ny harona amin'ny paik'ireo liam-pifaneraserany indrindra amin'ny fanangonana ny fihenan'ny fifanakalozam-bola ho mora amin'ny toekarena Forex. Noho izany, ny endri-tsoratra tsirairay dia manondro karazana fiovan'ny salan'isan'ny salan'isa raha oharina amin'ny vidin'ny closing amin'ny daty voafaritra tsara. Ireo fiovana, na fiverenana, dia aseho amin'ny isan-jato, miaraka amin'ny soatoavin'ny endriky ny andro fototra mifehy ny 100%. Noho izany, ny sandan'ny ambany 100% dia midika fihenam-bidy amin'ny daty fototra, ary ny sandan'ny ambony 100% dia mampiseho fiakarana.
Ny vola azo ao amin'ny widget dia ny Euro (EUR), ny Pound (GBP), ny Franc Swiss (CHF), ny US Dollar (USD), ary ny Yen (JPY). Ny pairs ampiasaina amin'ny fametrahana mari-pamantarana manokana dia ahitana foana ny vola mifanaraka amin'ny vola raisina, na dia efa notaterina faharoa aza ny nomeraon'ny serasera. Ny fampitomboana ny fanondroana dia manondro hatrany ny fanamafisana ny vola amin'ny namany, raha ny fihenan-tsakafo kosa dia midika ho fahalemena.
Ny widget ahafahana mametraka ny daty fototra andrasana, ary manondro ny vanim-potoana izay hiseho amin'ny tabilao amin'ny fisafidianana ny daty fanombohana, izay daty ny isa voalohany naseho ary ny isan'ireo andro hanarahana azy.
Inona no zava-miafina amin'ny fanaovana vola be amin'ny forex?
Voalohany aloha ny mamantatra ny vola izay manana fahafahana lehibe hankasitrahana.
Faharoa dia ny hamantatra ny vola izay manana ny lanjany lehibe indrindra hamerenana.
Ny fahatelo dia ny mifanaraka amin'ireo vola roa ireo.
Ny olana voalohany - Nankasitraka ve ny vidin'ny dolara amerikana tamin'ity taona ity? Azo inoana fa tsy afaka hamaly izany fanontaniana izany izahay, satria afaka nankasitraka an'i Euro sy Yen Yen, saingy mety hanilika an'i British Pound izany.
Ny olana faharoa - Raha efa fantatsika ny lasa tamin'ny alalàn'ny fananana data ho an'ny fe-potoana farany, ary tsy mbola afaka milaza isika hoe iza ny forex sandoka no mahery indrindra ary ny sandan'ny forex no malemy, dia ahoana no atao eto amin'izao tontolo izao hahafahantsika manombana ny hoavy tsy manana data ve?
Solution - Io metatra strenght tsotra io dia tsy afaka mamina hoavy fa farafaharatsiny afaka manampy antsika hanana sary an-tsaina ny lasa. Ny fehikibo miendrika mena (na ambaratonga 100) dia maneho ny toeran'ny tsy miandany. Ny manan-kaja ambonin'ity haavony ity dia mankasitraka ary ny valin'ny versa etsy ambany no ambany indrindra amin'izany.